musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Nzara Yepasi Pose Chinetso Chakakomba Iti Vazhinji maAmerican
"Ruzhinji rwevanhu vekuAmerica vanoziva kuti nzara yepasi rose idambudziko rakakura, uye dambudziko remamiriro ekunze idambudziko renzara. Zvino, vatungamiri vedu vanofanira kusimuka kuti vagadzirise zviri kunetsa,” vakadaro Dr. Charles Owubah, CEO, Action Against Hunger.
Kucherekedza World Food Day musi waGumiguru 16, Action Against Hunger, mutungamiri asingabatsiri mubato repasi rose rekupedza nzara, nhasi aburitsa zvakabuda muongororo yevanopfuura zviuru zviviri zvevakuru vekuUS yakaitirwa ivo neThe Harris Poll inoratidza kuti 2,000% yevaAmerica. tenda kuti nzara yepasi rose inoramba iri dambudziko rakakura. Imwe 86% yevaAmerica vanoti kushanduka kwemamiriro ekunze kuchawedzera nzara pakati penharaunda dzine hurombo pasi rose, uye vanopfuura hafu (73%) yevakapindura vanoti nyika dzakapfuma, seUS, dzinofanira kubatsira nyika dzine mari shoma kubhadhara mari dzekugadzirisa mamiriro ekunze. shanduko.
“Pasi pose, vanhu 811 miriyoni vanorara nenzara manheru ega ega - uye munzvimbo dzakawanda pasi rose, nzara inogona kuuraya. Tinofanira kuita zuva rega rega Zuva reWorld Food Day kudzamara tazadzisa chinangwa chedu chekupedza nzara kumunhu wese, zvakanaka,” akawedzera Dr. Owubah.
Zvimwe zvekutsvaga zvakawanikwa zvinosanganisira:
• Inenge hafu yevanhu vose vekuAmerica vanonetseka pamusoro pekuwedzera kwemitengo yezvokudya nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze. Pamusoro pezvo, 46% yevaAmerica vakati pakati pekunetseka kwavo kukuru kwemamiriro ekunze kune chizvarwa chinotevera "kugara munyika ine chikafu chishoma (kureva, kushomeka kwechikafu nekuda kwekuvhunduka kwemamiriro ekunze)."
• Boomers vangangotaura kuti nzara yepasi rose inoramba iri dambudziko rakakura. Kuziva nezvenzara yepasi rose senyaya yakakomba kwakakosha zvakanyanya pakati peBoomers (makore 57-75) avo vanogona kupfuura Gen Z (makore 18-24) naGen X (ane makore 41-56) kuti vatende nzara yepasi rose ichiri nyaya yakakomba. munyika nhasi (89% vs. 81% uye 83%).
• 75% yeAmerica inofunga kuti kuchinja kwemamiriro ekunze kunotyisa kune ramangwana revanhu, uye 74% tinotenda isu tose - kusanganisira mapoka akaita sehurumende, zvisingabatsiri, uye bhizinesi - tinofanira kuita zvakawanda kugadzirisa kuchinja kwemamiriro ekunze. Ongororo yakafanana kubva kuAction Against Hunger UK yakawana kushushikana kwakafanana pakati peveruzhinji ikoko.
• 60% yevarume, 68% yeGen Z, uye 76% yeVatema vekuAmerica vanotenda kuti nyika dzakapfuma, kufanana neU. Pakati pevarume, 60% inobvumirana nenzira iyi, kana ichienzaniswa ne53% yevakadzi. 76% yevasiri veHispanic Black America vanobvumirana nemafungiro aya, zvichienzaniswa ne50% chete yevasiri veHispanic White Americans uye 61% yevaHispanic America. 68% yeGen Z uye 65% yeMireniyamu inobvumirana, se52% yeGen X uye 47% yeBoomers.
Zvakawanikwa neAction Against Hunger zvakabuda mushure meGlobal Hunger Index ya2021, iyo yakaratidza kuti nzara ichiri “yakakomba, inotyisa, kana kuti inotyisa munyika dzinoda kusvika makumi mashanu” uye mushumo weSangano Romubatanidzwa Wenyika Dzapasi Pose wokuti munhu mumwe chete pavanhu 50 pasi rose anoda rubatsiro rwevanhu.
"Kuziva kana danho rekutanga rakakosha. Iye zvino, nyika inoda nzira dzinoshanda uye dzinozvidavirira dzekugadzirisa nzara uye kuchinja kwemamiriro ekunze sekutyisidzira kwehutano hwevanhu huri kukura, " Dr. Owubah akadaro. “Kutadza kugadzirisa nzara kunogona kukanganisa zvakanyanya nyika dzagara dzisina kusimba, sezvo nzara iri zvese honzeri nemhedzisiro yekunetsana. Kana tikaisa mari mukurwisa nzara nekuponesa hupenyu, tinodyara mune ramangwana: tsvakiridzo yakaratidza kuti $1 yega yega yakashandiswa kurwisa kushomeka kunoburitsa mari inosvika madhora gumi nematanhatu ekudzokera munharaunda.
Ongororo iyi yakaitwa online mukati meUnited States neThe Harris Poll pachinzvimbo cheAction Against Hunger pakati paGumiguru12-14, 2021 pakati pe2,019 US vakuru vane makore gumi nemasere+. Ongororo iyi yepamhepo haina kubva pane ingangoita sampuli saka hapana fungidziro yetioretical sampling kukanganisa inogona kuverengerwa. Kuti uwane yakakwana nzira yekuongorora, kusanganisira huremu hwakasiyana uye diki saizi saizi, ndapota taura naShayna Samuels, 18-718-541 kana [email inodzivirirwa]
Action Against Hunger isangano risingabatsiri rinotungamira sangano repasi rose rekupedza nzara muhupenyu hwedu. Inogadzira mhinduro, inotsigira shanduko, uye inosvika 25 miriyoni vanhu gore rega rega nezvirongwa zvekudzivirira nzara uye kurapwa. Sesangano risingabatsiri rinoshanda munyika makumi mashanu, vashandi varo vakazvipira zviuru zvisere nemazana matatu vanobatana nenharaunda kugadzirisa zvikonzero zvinoita nzara, kusanganisira shanduko yemamiriro ekunze, kusawirirana, kusaenzana, uye njodzi. Inovavarira kugadzira nyika isina nzara, kune wese munhu, kune zvakanaka.
Brazil Inofara neMisangano kuEexpo Dubai 2020
Marx, Lenin naHo Chi Minh bato kuEngels '...
Vols kubva kuDhaha kuenda kuMedina, Saudi Arabia kuQatar ...
Yekutanga muJamaica: Jakes Hotel Inosvika 100% ...
IMEX America: Zvakanaka Kudzoka!
Kureruka, kufanotaura uye kuita makiyi ku...
Kenya inopedza nguva yakareba yemadekwana-kusvika-mambakwedza COVID-19 curfew
WTM London Yakavhurika: Kusunungura kana Kutyisa?
Zvishongo zvitsva zveLuxury uye Watch Brand SABOTEUR Inotanga
Tsamba itsva yeUNWTO kuNyika dzayo Nhengo:...
Mitambo yeGay 2026: Valencia Spain Inokunda Iyo Yakakura
Zvinoshamisa 83% yeMakambani Akarova neCyber ​​​​Security...
A Big NO kuKenya Tourism neUNWTO: Africa Yakatsamwa!
Cycas Akanakidzwa neKubuda muSwitzerland
Argentina, Colombia, Namibia nePeru, haifanirwe kunge isina ...
2022 Maguta Akawanda Anopa muUSA
Chii chaunoda kuziva nezve kutamira kuDubai
Ryanair Inozivisa Yakakura Yakamboita Chirongwa kuJordani Iyi ...
Waizviziva Here Kuti Kune Aussie Outpost muMunich?
New San Francisco, Los Angeles, Miami, Amsterdam uye ...
Zvinonakidza, Zvinonakidza Chokwadi NezveCaribbean
IHG, Hilton naMarriott vanovimba neBenchmark Pyramid...
Maonero Ako paKuuya kweUNWTO Sarudzo Yakumbirwa
Vegetarian Pork vs Real Pork: Innovative Pig Kurera...
Israel ikozvino inobvumira vashanyi vekuRussia vane 2 jabs dze...
Uganda Tourism Ikozvino Inotangisa maCEO muDomestic Incentive...
Divine Painter Raphael Zvino Akadzoserwa kuHupenyu
Long-Haul COVID-19 Zviratidzo Kune Vanhu vane Rheumatic...
IATO Kokorodzano Yegore Negore Zvino Yakagadzirirwa Zvita pa ...
Vanhu vana vakaurayiwa, 19 vakakuvara mudutu reIstanbul
Jean-Michel Cousteau Resort, Fiji Zvino Inogamuchira Kudzoka ...
Actor Nyeredzi muNew Tourism Firimu yemari yeAEE
Mhosva Yerufu Yakashata Yasvitswa KuAstroworld Music...
Disney Cruise Line inorambidza vana vasina kubayiwa